Mayelana Nathi - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Umgomo Wethu: Qhubeka nokudala inani eliphezulu lamakhasimende futhi unikeze abasebenzi inkundla yokubona ukuzethemba
Umbono Wethu: Uzibophezele ekubeni umhlinzeki wendwangu osebenza kahle kakhulu futhi oqhudelana naye futhi ukhuthaze ukuthuthukiswa okusimeme nokunempilo kwemboni
Izimiso Zethu: Ukugxila, Ukusungula, Ukusebenza kanzima, Ukubambisana, Win-win
I-Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd. yasungulwa ngo-2004. Ingumnikezeli ochwepheshe wezindwangu eziphothiwe.UFuzhou Huasheng uzibophezele ekuhlinzekeni ngekhwalithi ephezulu yezindwangu eziluka eziqondile neziluniwe eziyindilinga ezisebenza kahle kubasebenzisi bomhlaba.
Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-16 yentuthuko eqhubekayo nokuqanjwa okusha, uFuzhou Huasheng usezakhele ukubambisana kwamasu okuhlala isikhathi eside nokuzinzile namakhasimende abalulekile avela eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia njll. UFuzhou Huasheng ujabulela idumela elihle emkhakheni we izindwangu eziluka ezisontekile nezindwangu ezihlanganisiwe eziyindilinga.
I-Fuzhou Huasheng ikhethekile ku-R&D, ukukhiqizwa nokumaketha kwezindwangu ezinezikhala, izindwangu ze-tricot, izindwangu zejezi, izindwangu ezihlanganisiwe, izindwangu ze-jacquard, izindwangu ze-mélange nezindwangu ezisebenzayo.Sisebenzisa izintambo ezisebenza kahle kakhulu futhi sizenze ziguqulwe zibe izindwangu ezilungele ukusebenza bese zilethwa kumakhasimende ethu abalulekile avela emhlabeni wonke.
Njengamanje, sinemishini yokuluka engaphezu kuka-60 futhi sinabasebenzi abanolwazi ababalelwa ku-150.Ngokulindelwe okusha kwemakethe ngekusasa elisimeme, silungise izindlela zethu zokukhiqiza kanye namaketango wokuhlinzeka.Sizinikela ekuhlinzekeni inani nesixazululo kumakhasimende ethu.
Izindwangu zethu zisetshenziswa kakhulu emikhakheni eminingi efana nezemidlalo, ukugqokwa komfaniswano, izingubo ze-yoga, ukugqokwa okungajwayelekile, izingubo zemfashini, ukugqokwa komdanso, izingubo zangaphansi, izingubo zokubhukuda, izingubo zangaphansi, nezingubo zangaphansi njll.
UFuzhou Huasheng unamathela kumqondo webhizinisi wekhwalithi impilo yethu futhi iKhasimende lingowokuqala.
Yamukelani ngokufudumele abangane abathandekayo abavela kuwo wonke umhlaba ukuze bavakashele inkampani yethu futhi nixoxisane ngebhizinisi.